tUgaarsade - Free Android app | AppBrain
Android Apps > Entertainment > tUgaarsade
Noqo Ugaarsade, si aan laguu ugaarsan!!
Aug 29, 2020 Update Version 1.0.9
Aug 12, 2020 New App Version 1.0.3 in ENTERTAINMENT for Free
tUgaarsade waa App kooban oo Aqoon kororsi ah, kuna shaqeynaya Internetka. Waydiinta markaas taagan ayaa loo yaqaannaa Ugaar, taas oo lagaa rabo inaad iskudday ka bixiso, mararka qaar ayaa ku xusan Abaalmarin oo qofka sida saxda uga jawaabo lagu guddoonsiinayaa Abaalmarinta ku xusnayd.
tUgaarsade wuxuu leeyahay:-
- Ugaar bisil: oo ah Waydiin leh afar Iskudday oo midi sax tahay.
- Ugaar cayriin: oo ah Waydiin toos ah oo lagaa sugayo inaad ka warceliso.
- Natiijo: waa natiijada ugaarsatada guulaysatay.
- Horyaal: waa kala sarraynta dhibcaha Ugaarsatada ugu sarraysa.
Lama hubo in sidaas u shaqaynayo Appka balse adiga ayaa ogaan kara!!
*** WALINA HORUMARIN AYAA KUSOCDA APPKA ***
- Cillado aan la filayn ayaa la xalliyay.
- Wax-qabadka ayaa la fududeeyay.
abaalmarinta appka ayaa cayriin dhibcaha guddoonsiinayaa guulaysatay inaad iskudday kororsi lagaa natiijo sarraynta shaqaynayo shaqeynaya sugayo tugaarsade ugaar ugaarsatada waa warceliso waydiin waydiinta xusnayd yaqaannaa
guul horay kahelay tugaarsade usoco waan
Abdirashid Mohammed Adem